ဆေးတက္ကသိုလ်, ၂, ရန်ကုန် - ဆေးပညာ. ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် သ
ဆေးတက္ကသိုလ်, ၂, ရန်ကုန် - ဆေးပညာ. ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်‌ဥက္ကလာပမြို့နယ် ခေမာသီလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ၁၂ မို ..
အာဒိုဘီ ပိုတိုရှော့ သည် ဝင်းဒိုးစ် နှင့် မက်အိုအက်လ် အတွက် အာဒိုဘီအင်စ် မှထုတ်ဝေသောပုံနှိပ်ထားသော ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာများ ဖြစ်သည်။ မူလက သောမတ်စ် နှင့် ဂျော်နိူး တီထွင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဆော့ဝဲသည် လက်လ်စတေဂရပ်ဖစ် တည်းဖြတ်ခြင်းသာမက ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာ တစ်ခုလုံးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆော့ ဝဲ၏အမည်သည် ယေဘူယျကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်လာသည်။ အာဒိုဘီကထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုကိုအားမပေးသော်လည်းကြိယာ အဖြစ်အသုံးပြုနိင်သည်။ မျိုးစုံအလွှာများနှင့်အထောက်အပံ့များအတွက် ပိုတိုရှော့ကိုလုပ်နိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ရန်နှင့်ရေးဖွဲ့အကြောင်းအရာအကြမ်းပုံရိပ်တွေ မျက်နှာဖုံးများ အဲလ်ဖိုင့်ပေးသည် နှင့်အများအပြာ ...
ဂရိဒဏ္ဍာရီ သည် ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးများ မူလအနေဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ကြသော ဒဏ္ဍာရီ အစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်၍ ရှေးဂရိရိုးရာပုံပြင်ဇာတ်လမ်း အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းပုံပြင်များတွင် ကမ္ဘာလောက၏ မူလအစနှင့် သဘောသဘာဝ၊ နတ်ဘုရားများ၊ သူရဲကောင်းများ၊ ဒဏ္ဍာရီလာသတ္တဝါများ စသည်တို့၏ ဘဝနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုးတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနှင့် ရိုးရာဓလေ့ကျင့်ထုံးတို့၏ မူလဇာစ်မြစ်များနှင့် အရေးပါမှုတို့ ပါဝင်ကြသည်။ ရှေးဂရိလူမျိုးတို့၏ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး အလေ့အထများနှင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို မီးမောင်းထိုး ဖော်ပြရန်နှင့် ဒဏ္ဍာရီဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သဘောသဘာဝကို နားလည်ရန်အလို့ ...
ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန် သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်‌ဥက္ကလာပမြို့နယ် ခေမာသီလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှ ၁၂ မိုင်ခန့်ကွာဝေးသည်။ ဆေးတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်သည် Educational Commission for Foreign Medical Graduates က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အသိအမှတ်ပြုသော ကျောင်း ၄ ကျောင်းအနက်တစ်ကျောင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၌ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် ဆေးကောလိပ်အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ မဟာဌာနတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့သော်လည်း ၁၉၆၄ တွင် သီးခြား တက္ကသိုလ်အင်စတီကျုတစ်ခုအဖြစ် ကူးပြောင်းခဲ့သည်။
၁၉၇၃ ခု၊ အောက်တိုဘာ ၁ တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က ဆေးပညာဌာန ယခု ဆေးသိပ္ပံ ၏ လက်အောက်တွင် စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
၁၉၆၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဆေးတက္ကသိုလ်၂ ရန်ကုန်ကို ပါမောက္ခချုပ်မှ ဦးဆောင်အုပ်ချုပ်သည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ပါမောက္ခချုပ်များမှာ-
၂၀၀၄–၂၀၀၇: ပါမောက္ခ ဒေါ်သန်းနုရွှေ.
၁၉၈၉–၁၉၉၂: ပါမောက္ခ ဦးကိုလေး.
၁၉၈၇–၁၉၈၉: ပါမောက္ခ ဦးမျိုးသွယ်.
၁၉၆၇–၁၉၇၃: ပါမောက္ခ ဦးအေး.
၂၀၁၄–၂၀၁၅: ပါမောက္ခ ဦးဇော်ဝေစိုး.
၁၉၉၂–၂၀၀၄: ပါမောက္ခ ဦးသာလှရွှေ.
၁၉၈၂–၁၉၈၇: ပါမောက္ခ ဦးတင်အောင်ဆွေ.
၁၉၇၃-၁၉၇၉: ပါမောက္ခ ဦးရွှေတင်.
၁၉၇၉–၁၉၈၂: ဒေါက်တာ ဦးခင်မောင်ငြိမ်း.
၂၀၀၇–၂၀၁၅: ပါမောက္ခ ဦးတင့်ဆွေလတ်.
၂၀၁၇–လက်ရှိ: ပါမောက္ခ ဦးအေးထွန်း.
၁၉၆၃–၁၉၆၇: ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကိုကြီး.
၂၀၁၅–၂၀၁၇: ပါမောက္ခ ဦးအေးအောင်.
ဇီဝကမ္မဗေဒ နှင့် ဇီဝဓာတုဗေဒ.
သင်္ချာ နှင့် စာရင်းအင်း ပညာ.
4.1. ဘာသာရပ်များ ပထမနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
4.2. ဘာသာရပ်များ တတိယနှစ် အမ်ဘီဘီအက်စ်
4.3. ဘာသာရပ်များ နောက်ဆုံးနှစ် အပိုင်းက အမ်ဘီဘီအက်စ်
ကာကွယ်ရေးနှင့် လူမှုရေးဆေးပညာ နယ်ကွင်းဆင်းသင်တန်း ၃ပတ်.
ရောဂါဗေဒ နှင့် သွေးပညာ.
4.4. ဘာသာရပ်များ အလုပ်သင်ဆရာဝန်
Wikipedia: ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရန်ကုန်
ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရန်ကုန်, ဆေးပညာ. ဆေးတက္ကသိုလ် (၂) ရန်ကုန်,